Ijaji likahulumeni limisa igunya lokugoma le-United Airlines COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ijaji likahulumeni limisa igunya lokugoma le-United Airlines COVID-19
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ijaji likahulumeni limisa igunya lokugoma le-United Airlines COVID-19.
Ijaji layalela ukunqunyelwa okwesikhashana kwi-United Airlines, kuvimbela inkampani ukuthi iphoqelele igunya layo lokugomela i-COVID-19 kubasebenzi nokubeka abasebenzi abacela ukukhululwa ekhefini elingakhokhelwa.
Ijaji lesifunda saseMelika uMark Pittman uphendule ngesenzo sekilasi esilethwe ngummangali kanye nokaputeni we-United Airlines uDavid Sambrano, isakhamuzi saseNyakatho neTexas.
UPittman wayalela ukunqunyelwa okwesikhashana kwi-United Airlines, evimbela inkampani ukuthi iphoqelele igunya layo lokugoma kubasebenzi.
Umbusi waseTexas uGreg Abbott ukhiphe umyalo wokuphatha ovimbela noma iyiphi inhlangano eTexas ekugunyaziseni ukugonywa kukaCovid-19 kubasebenzi noma kumakhasimende.
IJaji Lesifunda sase-US uMark Pittman uphendule enkantolo yenhlangano emelene ne-United Airlines efakwe ngabasebenzi bezindiza abayisithupha ngokuyalela umphathi ukuthi amise okwesikhashana igunya lakhe lokugoma i-COVID-19 elizobeka abasebenzi abangagonyelwanga ikhefu elingakhokhelwa.
UPittman ukhiphe i-oda lakhe ephendula isenzo sekilasi esilethwe ngummangali futhi Lufthansa ukaputeni David Sambrano, isakhamuzi saseNyakatho Texas.
USambrano ubengomunye wabasebenzi abayisithupha abafake isimangalo kuhulumeni bethi kunendlela yokubandlululwa enkampanini yezindiza ezinze eChicago; “babecele indawo yokuhlala yezenkolo noma yezokwelapha egunyeni le-United lokuthi abasebenzi bayo bathole umuthi wokugoma i-COVID-19.”
Ijaji layalela ukuthi kukhishwe incwadi yesivimbelo okwesikhashana Lufthansa, kuvimbela inkampani ekuphoqeleleni igunya layo lokugoma i-COVID-19 kubasebenzi nokubeka abasebenzi abacele ukukhululwa ekhefini elingakhokhelwa. Incwadi yesivimbelo iyaphela ngo-Okthoba 26. Inikeza ijaji isikhathi sokuzwa izimpikiswano ezifanele zabasebenzi nezenkampani yezindiza.
Abasebenzi, abafake isikhalazo sabo ngoSepthemba 21, baphikise ngokuthi ukubeka abasebenzi ekhefini elingakhokhelwe akuyona indawo yokuhlala efanelekile, kepha “kuyisenzo esibi sokuqashwa” ngakho-ke kusho ukubandlululwa.
USambrano ngokwakhe wafaka isicelo sokuxolelwa ukwelashwa, eseluleme ku-COVID-19. Uthi isicelo sakhe senqatshwa uhlelo lwe-United lokuhlala online.
Lufthansa umemezele ngo-Agasti 6 ukuthi kuzodinga ukuthi bonke abasebenzi bayo baseMelika abazinze ku-67,000 bathole i-jab. Ngesikhathi sokumenyezelwa kwayo, inkampani yezindiza yaphakamisa ukuthi cishe ama-90% abashayeli bezindiza kanye no-80% wabasebenza ezindizeni base bevele begonyiwe. Lithe isibalo esincane sabasebenzi abenqaba lo mgomo bazobekwa ekhefini elingakhokhelwe.
Inkampani yezindiza ithi “yenza umzamo omuhle wokholo ukuphatha ukuphepha emsebenzini kanye nokuhlinzeka ngezindawo zokuhlala ezifanelekile naphezu kwezimo ezazingakaze zibonakale futhi ziguquka ngokushesha” futhi yayisifake nesicelo sokuchitha leli cala.
Okwamanje, Umbusi waseTexas uGreg Abbott ukhiphe i-oda ephezulu evimbela noma iyiphi inhlangano eTexas, kufaka phakathi amabhizinisi azimele, ekugunyaziseni ukugonywa kwe-COVID-19 kubasebenzi noma kumakhasimende.
Imigwaqo YamaPhoyisa Wokugoma Amaphoyisa aseFrance Ayinalutho iCafés yaseParis